musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Culinary » 2021 Wepamusoro 10 Global Foodie Hotspots Anoratidzwa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Chikafu chatinofarira pazororo ndicho chimwe chezvikonzero zvakawanda zvatinoda kufamba.
Ndedzipi nzvimbo dzakanakisa dzevanoda chikafu?
Ndekupi kwakanakisa kweMichelin nyeredzi, chikafu chemumugwagwa uye vegan hotspots?
Nyanzvi dzakaongorora maguta makuru kutenderera pasirese kune zvinhu zvinoverengeka zvinosanganisira Michelin ine maresitorendi ane nyeredzi, mhando dzechikafu chiripo, nzvimbo dzekudya dzemumigwagwa, uye% yezvirimwa zvevegan / vezvinomera.
Kubva pane chikafu chemumigwagwa mumisika yekunze inofamba-famba kusvika kune yekucheka-cuisine muresitorendi ine nyeredzi yeMichelin, chikafu chatinofarira pazororo ndicho chimwe chezvikonzero zvakawanda zvatinoda kufamba.
Asi ndezvipi nzvimbo dzakanakisa kune vanoda chikafu? Uye aripi akanakisa eMichelin ane nyeredzi, chikafu chemumugwagwa uye vegan hotspots?
Nyanzvi dzekufambisa indasitiri dzakaongorora maguta makuru kutenderera pasirese kune zvinhu zvinoverengeka zvinosanganisira Michelin ine maresitorendi ane nyeredzi, mhando dzechikafu chiripo, nzvimbo dzekudya dzemumugwagwa, uye% yezvitoro zvevegan / vezvinomera kuratidza nzvimbo dzakanakisa dzevekudya.
Maguta Akanakisa MuPasirese eFoodies:
Panzvimbo yepamusoro seguta repasi rose rekudya riri Bern, Switzerland iyo yakagamuchira mamakisi e6.34. Bern akarova zvakanyanya pahuwandu hweMichelin Guide maresitorendi anowanikwa muguta pavanhu zviuru zana uye ane huwandu hwakaenzana hwezvisarudzo zvekudya mumigwagwa pakukura kweguta.
Pasinei nehukuru hwayo, Luxembourg City ndiyo yechipiri-yakanakisa foodie hotspot kunze uko, yawana mamakisi e6.30. Guta guru renyika inofananidzwa ihotera yekudyira kwakanaka uye chikafu chemunharaunda, saka ive shuwa yekuzvitarisa kune yako inotevera European guta break.
Bruges, kurova zvinofarirwa naFlorence neVenice kunzvimbo yechitatu, inzvimbo huru yekushanyira chikafu chinonaka. Iyo waffles uye machokoreti ayo Belgium inozivikanwa nekuda kwawo anogona zvese kuwanikwa muhuwandu hwakawanda mukati meguta.